तपाईं कसरी एक वित्तीय बबल उत्पादन गर्नुहुन्छ? | अर्थव्यवस्था वित्त
तपाईं कसरी एक वित्तीय बबल उत्पादन गर्नुहुन्छ?
धेरै महिनादेखि अधिक र अधिक आधिकारिक आवाजहरूले वित्तीय बबल फुट्ने बारे चेतावनी दिइरहेका छन्। यो विभिन्न वित्तीय एजेन्टहरूको तर्फबाट एक धेरै अवांछित परिदृश्य हो, यद्यपि यो सत्य हो कि यो एक शब्द हो जुन जनताको ठूलो हिस्सालाई अज्ञात छ। यो डरलाग्दो परिदृश्यले ल्याउन सक्ने प्रभावहरूको गुरुत्वाकर्षणको साथ तिनीहरू सबैले धेरै डराउँछन्। अचम्म मान्नु पर्दैन, यो त्यस्तो चीज हो जुन अर्थतन्त्रको सबै भन्दा सान्दर्भिक पक्षहरूलाई असर गर्न सक्दछ। रोजगारी सिर्जनाबाट देशको आर्थिक बृद्धि।
वित्तीय बबलको प्रतिक्रियाहरू जाँच गर्न सुरु गर्नु अघि, यसको वास्तविक अर्थ प्रमाणित गर्न राम्रो अरू केही छैन। ठिक छ, यो आर्थिक परिदृश्यमा मूलतः प्रदर्शनको सट्टा एक प्रदर्शन हो बिरुद्द आर्थिक बजारमा उत्पन्न हुने घटनाको मुख्य कारणले गर्दा प्रक्रिया अनुमानमा जोडिएको छ। यो बिभिन्न कारणहरू र विविध प्रकृति, जस्तै रियल इस्टेट, शेयर बजार वा कुनै अन्य प्रकारको लागि व्युत्पन्न हुन सक्छ। विशेष प्रासंगिकताको यी आर्थिक वा वित्तीय प्रक्रियाहरूको उत्पत्तिको बारेमा त्यहाँ कुनै प्रतिबन्धहरू छैनन्।
यसलाई समग्र गहनताका साथ बुझ्नको लागि एउटा पक्षलाई ध्यानमा राख्नै पर्छ त्यो के हो जुन यस जटिल आन्दोलनको शिकार भएको समाजमा रहेको यसको प्रतिक्रियाहरू हुन्। ठिकै हो, यो भुल्दैन कि यो हुनको लागि सबैभन्दा धेरै सामान्य तरिकाहरू केहि सेयरको मूल्य वा अचल सम्पत्तिको मूल्य असामान्य र लामो समयसम्म बढ्नको कारण हुन सक्छ। हदसम्म यसको सबैभन्दा तत्काल प्रभाव महत्त्वपूर्णको उपस्थिति हो तथाकथित अनुमानको सर्पिल। र यसको सबैभन्दा तत्काल प्रभावहरू के हुन्? खैर, दुर्भाग्यवश के सामान्य अर्थव्यवस्था मा चोट पुग्छ।
1 बबल: कुन वित्तीय सम्पत्तिमा?
2 अधिक मूल्य को शूटिंग
3 मूल्यहरु मा क्र्यास
4 ठूलो डिप्रेशनको जीवाणु
5 स्पेनमा घर जग्गा बबल
6 समस्या समाधान गर्न समाधानहरू
बबल: कुन वित्तीय सम्पत्तिमा?
वित्तीय बबल कुनै पनि वित्तीय सम्पत्तिमा देखा पर्न सक्छ, यद्यपि यो दुर्लभ हुन सक्छ। यस अर्थमा, त्यहाँ बहिष्कारको कुनै वर्ग छैन हालका वर्षहरु को अनुभव द्वारा पुष्टि गरीएको। तिनीहरू मध्ये कुनैले केही प्रभावहरू ल्याउन सक्छ जुन खराबको रूपमा कम मानिनु पर्छ। Beण बाट व्युत्पन्न इक्विटी बजारमा बबलको रूपमा गठन गरिएको हुन सक्छ। अचम्म मान्नुपर्दैन, तिनीहरू सबै केसहरूमा एउटै प्रक्रियामा जान्छन्। आर्थिक दर्शकहरु को एक राम्रो भाग को लागी unmistakable को बिन्दु मा। एक वास्तविकता को रूपमा यसलाई सही तरीकाले व्याख्या गर्न र यसलाई सबै उपयोगकर्ताहरूको लागि बुझ्ने बनाउँदछ।
यस सामान्य परिदृश्यबाट, त्यहाँ कुनै श .्का छैन स्पष्ट रूपमा अकथनीय तरिकामा सुरू हुन्छ। अर्को शब्दहरुमा, त्यहाँ उनीहरुको मूल्यहरु मा एक अप्राकृतिक overheating छ कि तिनीहरूलाई निश्चित असंगत स्तर पुग्न नेतृत्व। जे होस् प्रभावित वित्तीय सम्पत्ति, एक सम्पत्ति, सार्वजनिक debtण वा कुनै पनि बहुमूल्य धातु। यस कार्यको परिणामका रूपमा लगानीकर्ताहरूले विकसित अपरेसनहरूमा धेरै पैसा कमाउन सक्दछन्। तर तिनीहरूले आफ्नो स्थानहरू द्रुत रूपमा बन्द गर्नुपर्नेछ किनभने उनीहरूले आफ्नो पूँजीको एक ठूलो अंश धेरै छोटो समयमा गुमाउन सक्दछन्।
अधिक मूल्य को शूटिंग
प्रक्रियामा जसमा वित्तीय बबल फारमहरू एक वित्तीय सम्पत्ति को मूल्य को वृद्धि संग अधिक ध्यान दिएर हुन्छ। किनभने यदि यो अद्वितीय प्रक्रिया केहि चीज द्वारा विशेषता छ भने, यो किनभने प्रश्न मा सम्पत्ति विवादास्पद र असामान्य अवधि को एक निश्चित अवधिमा बिक्री को वृद्धि को कारण अवधि को दौरान बढेको छ। यसको मूल्य गगनचुम्बी। स्तरमा पुग्न नसक्दासम्म कि उनीहरू कहिल्यै पुग्न सकेका छैनन् र यसले साना र मध्यम लगानीकर्ताहरूको ध्यान आकर्षित गर्दछ। कुनै छक्कलाग्दो कुरा होइन, हामी वित्तीय बजारमा आन्दोलनहरूबारे कुरा गर्दैछौं जुन कुनै साधारण छैन। यदि होईन भने, यसको विपरीत, तिनीहरू स्पष्ट अपवाद हुन् किनकि तपाईं यस लेखको स्पष्टीकरणमा देख्न सक्नुहुनेछ।
अर्कोतर्फ, यो परिदृश्यले तपाईंलाई पछि बेच्न मद्दत गर्दछ र यस परिदृश्यबाट पार हुने वित्तीय सम्पत्तिमा सम्पन्न अपरेशनहरूमा उत्कृष्ट पूंजी लाभ प्राप्त गर्न सक्दछ। अर्कोतर्फ, पछि प्रभाव पूर्ण रूपमा विपरित छ। त्यो हो, जब उत्पादन वा सम्पत्ती को मूल्य भएको छ अनुमानको वस्तु तिनीहरू वास्तविक मूल्यबाट टाढा छन् जुन त्यस समयमा उनीहरूले पाउनुपर्दछ। सब भन्दा द्रुत प्रभाव हो कि मूल्य हावामा उफ्रिन्छन् किनकी तिनीहरू अश्‍लील कुरा गर्छन्। पतनसँग जुन प्रयोगकर्ताहरूको लगानीलाई खतरामा पार्न सक्दछ।
मूल्यहरु मा क्र्यास
मूल्यहरु गर्न सक्छन् drop०% सम्म ड्रप वा अझ अधिक तीव्रताका साथ वा के समान हो तिनीहरू ठूला भाईरसको साथ ध्वस्त हुन्छन्। आन्दोलनहरूमा जुन उनीहरूको विकासमा पूर्ण रूपमा असामान्य हो र यो शून्य मानसम्म पुग्न सक्छ, जस्तो कि केही अन्य वित्तीय सम्पत्तिको साथ हालसालै भएको छ। धितोहरू वा वित्तीय सम्पत्तिहरूको यस वर्गमा स्थित हुने यो जोखिम मध्ये एक हो। किनकि तपाईं यो बिर्सनुहुन्न कि यस पल्टमा गरिएको लगभग सबै लगानी हराउन सक्नुहुन्छ।
त्यसकारण यो आश्चर्यजनक कुरा होइन कि यी अनौंठो आन्दोलनहरू भनिन्छ दरार र त्यो इक्विटी बजारमा र अधिक विशेष रूपमा शेयर बजारमा पनि उत्पन्न गर्न सकिन्छ। अर्थतन्त्रको सबै पक्षहरुमा उनीहरु धेरै खतरनाक आन्दोलन भइरहेकोले उनीहरूले देशको सम्पत्ति नष्ट गर्न सक्दछन्। यस परिप्रेक्ष्यमा, तपाईं यो बिर्स्न सक्नुहुन्न कि यसको विकासमा तपाईलाई स्थितिमा रहनबाट जोगिनु पर्छ किनभने तपाई आफैं घाटाको ठूलो सर्पिलमा डुबेको देख्न सक्नुहुन्छ। सुरुबाट कल्पना गर्न सक्ने भन्दा बढि
ठूलो डिप्रेशनको जीवाणु
इतिहासको समीक्षाले प्रकट गर्दैन कि यी आन्दोलनहरू देशको अर्थतन्त्र वा विश्वव्यापी रूपमा पनि ठूलो उदासीनताको उत्पत्ति हुन सक्दछन्। मा के भयो उदाहरणहरु छन् १ 30 s० को दशकमा ठूलो डिप्रेशन १ 80 s० को दशकमा संयुक्त राज्य अमेरिका र जापानमा कम सम्पत्ती घर जग्गाको बुलबुले। तिनीहरू वित्तीय सम्पत्तिमा यस खतरनाक आन्दोलनको प्रभावको चित्रण हुन्। यसको वास्तविक वा कम्तिमा अनुमानित मूल्यबाट मूल्यमा एक ड्रप भन्दा बढी।
किनभने वास्तवमा यसले देशको अर्थतन्त्र ढल्दै जान सक्छ। कम आर्थिक बृद्धि संग, बढी बेरोजगारी र मूल्यको साथ भुइँमा पैसा को मूल्य। संक्षिप्तमा, यो सबैभन्दा खराब सम्भव परिदृश्यमा जब यसले एक राष्ट्रको जगलाई असर गर्दछ। यस अर्थमा, आजकल व्यक्तिहरू सार्वजनिक debtणमा एक बुलबुलेको बारेमा कुरा गर्दैछन् र जुनसुकै समयमा यसले साना र मध्यम लगानीकर्ताहरूको आशालाई बिगार्न सक्छ। यस अर्थमा, वित्तीय विश्लेषकहरूको एक राम्रो हिस्सा आफ्ना ग्राहकहरु लाई यी सुविधाहरूको निश्चित आयको संपर्कमा नपर्न सुझाव दिन्छ। किनभने उनीहरूले जीत भन्दा बढी गुमाउन सक्छन्।
स्पेनमा घर जग्गा बबल
स्पेनमा हामीले आवासको मूल्यको साथ अनुभव गरिरहेका छौं नजिकको अवस्थामध्ये एउटा हो। किनभने वास्तवमा, यो स्तरमा फेरि बढ्दैछ जुन हालका वर्षहरूमा देखिएको छैन र त्यो मूल्य विकृति हुन ट्रिगर हुन सक्छ। यस अर्थमा, कि सम्पत्तीहरूको यस वर्गका लगानीकर्ताहरूले तिनीहरूको सञ्चालनमा धेरै पैसा कमाउँदैछन्। तर पक्कै तिनीहरू गम्भीर जोखिम चलाउँछन् साहस गुमाउनुहोस् यी सुविधाहरूको बबलको परिणामको रूपमा। व्यर्थमा होइन, यो उही प्रक्रिया हो जुन स्पेनमा आर्थिक संकटको सुरुसँगै अनुभव भएको थियो। जहाँ घरको मूल्य नयाँ मालिकहरूद्वारा अपेक्षित नभएको स्तरमा गिरावट आएको छ।
उद्योग विश्लेषकहरू पहिल्यै चेतावनी दिइसकेका छन् कि यही प्रक्रिया हुन सक्छ। यस निष्कर्षमा पुग्न एक लक्षणको मूल्यमा भएको तीव्र वृद्धि हो भाडामा पछिल्ला महिनाहरूमा। ठूला ठूला ठूला राजधानीहरूमा यो पुगेको छ मूल्यहरु जुन वास्तवमै प्रतिबन्धात्मक हो सम्भावित तुलनाकारहरूको एक राम्रो भाग को लागी। यो रियल इस्टेट मार्केट मूल्यको वार्मिंगको साथ के हुँदैछ भनेर एक गम्भीर चेतावनी हो। स्पेनिश अर्थव्यवस्थाको लागि आधारभूत क्षेत्र र यदि यो भयो भने स्पेनको आर्थिक सुधारलाई बिगार्न सक्छ।
समस्या समाधान गर्न समाधानहरू
आर्थिक वा वित्तीय बबलको भयानक प्रभावहरू आउनु अघि, यसको घटना घटाउन विभिन्न उपायहरू पार गर्नु बाहेक अरू विकल्प हुनेछैन। अवश्य पनि यस समस्यालाई परास्त गर्न युरोपेली केन्द्रीय बैंक स्थितिमा छ ब्याज दर बढाउनुहोस् बैंकि,, र, अलि अलि गर्दै, कार्यहरूको र फ्लोरको मूल्य सामान्यतामा जान्छ। यस उल्लेखनीय प्रक्रियामा भाग लिने आर्थिक एजेन्टहरूको ठूलो अंशको लागि वांछनीय छ। अर्कोतर्फ, तपाईले आपूर्ति र मागको कानूनसँग सम्बन्धित सबै कुरा पनि ध्यानमा राख्नुपर्दछ।
जे भए पनि हामी सबै देशको अर्थतन्त्रका लागि सबैभन्दा खतरनाक परिदृश्य मध्ये एकको बारेमा कुरा गर्दैछौं र कि सरकारले यसलाई हर हालतमा रोक्न खोज्छन्। किनभने यसको प्रतिक्रियाहरू सबैको हितका लागि घातक हुन्छन्। जबकि अर्को तर्फ, यी समस्याहरू केही आवृत्तिको साथ देखा पर्नको लागि सामान्य छैन। यदि होईन भने यसको विपरितमा तिनीहरू अस्थायी अवधि हुन्।
लेखको पूर्ण मार्ग: अर्थव्यवस्था वित्त » सामान्य अर्थव्यवस्था » तपाईं कसरी एक वित्तीय बबल उत्पादन गर्नुहुन्छ?
पियर-टु-पियर लेन्डि plat प्लेटफर्महरू के हुन्?
स्टक ट्रेडिंगमा पैसा बचाउन १० सल्लाहहरू